Iyini ingozi ye-Vitamin C, nokuthi ungayisusa kanjani - Ukufaneleka kanye nempilo 2022
Ingabe I-Vitamin C Ayisizi Emakhazeni Nomkhuhlane?
Yikuphi ukudla okuqukethe i-Vitamin C nokuthi ungayisebenzisa kanjani ngendlela efanele
Ngokwezibalo, cishe amaphesenti ayishumi nanhlanu abantu base-Ukrainian bavakashela odokotela abanezimpawu zokudlula ngokweqile ngezithako zokudla namavithamini minyaka yonke. Futhi izinombolo ziyakhula.
Futhi konke ngenxa yesifiso sokudla amavithamini amaningi ngangokunokwenzeka ukuze ube nempilo. Okokuqala, lokhu kuthinta i-vitamin C, wonke umuntu asetshenziselwa ukuyiphuza ukuze ayivimbele, kodwa igcwele izinsongo.
I-Vitamin C, i-ascorbic acid, noma ithebhulethi ejwayelekile kuwo wonke umuntu kusukela ebuntwaneni ngezimpawu zokuqala zomkhuhlane. Isazi sokudla okunempilo kanye nesazi sohlelo lokudla okunempilo uSvetlana Svichkar utshela ukuthi iyini ingozi yaleli vithamini nokuthi lingasuswa kanjani.
Akunconywa ngokuphelele ukuphatha umkhuhlane ngemithamo emikhulu ye-vitamin C, ngoba ayinawo umphumela onjalo. Ngaphezu kwalokho, ayinawo umphumela omuhle kakhulu ekwandeni kwegazi, okungukuthi, kungabangela ukopha, yiqiniso, uma kwenzeka kudlula i-overdose.
Endabeni ye-overdose, kuneminye imiphumela emibi - ukubonakala komzwelo wokushaya kwenhliziyo, ubuhlungu be-spastic esiswini, kanye nokungezwani okuhlukahlukene kungase kuvele.
Uma kubonakala kuwe ukuthi le vithamini itholakala kuphela kulamula nezithelo ze-citrus, khona-ke awulungile.
Iningi lazo litholakala ku-parsley ne-dill futhi, kunjalo, ezithelweni ezisawolintshi. I-vitamin C eningi nayo itholakala eklabishi evamile - amagremu angu-200 eklabishi azokwanela ukuhlangabezana nezidingo zansuku zonke zomzimba.
Kufanele futhi uqaphele abantu abanezifo zepheshana lesisu, ngoba i-acidity eyengeziwe ingalimaza kakhulu. Ngakho-ke, ngaphambi kokusebenzisa noma yimuphi umuthi, kufanele uthintane nodokotela futhi, uma kunesidingo, uhlolwe.